mirayiridzo yeedd uye maitiro akanakisa
Kuru Agile BDD Nongedzo uye Zvakanakisa Maitiro
BDD Nongedzo uye Zvakanakisa Maitiro
BDD (Behaeve Driven Development) inzira yekuvandudza software kuburikidza nekuenderera muenzaniso-based kutaurirana pakati pevanogadzira, QAs uye BAs. Mune ino chinyorwa tinokurukura mamwe eBDD Akanaka Maitiro ekuti ubatsirwe zvakanyanya.
Kupfuura chero chinhu chipi zvacho, chinangwa chekutanga cheBDD nzira ndeyekukurudzira kutaurirana pakati pevabatanidzwa vechirongwa ichi kuitira kuti mamiriro echinhu chimwe nechimwe anzwisiswe nenzira kwayo nenhengo dzese dzechikwata (kureva kunzwisisa kwakagovaniswa), basa rekuvandudza risati ratanga. Izvi zvinobatsira pakutsanangura makesi akakosha enhau yega yega uyezve kubvisa zvisizvo kubva pane zvinodiwa.
MuBDD, Mienzaniso inonzi Zviitiko. Mamiriro ezvinhu akaumbwa akatenderedza iyo Chirevo-Chekuita-Mhedzisiro pateni uye zvakanyorwa mune yakasarudzika fomati inonzi Gherkin .
Zviitiko izvi inzira yekutsanangura (muchiRungu chakajeka) maitiro echinhu chinopihwa chinofanira kuzvibata mumamiriro akasiyana kana nemaparamende akasiyana ekuisa.
Nekuti Gherkin yakaumbwa, inoshanda zvese seyakatsanangurwa uye yekuisa mune otomatiki bvunzo, ndosaka zita racho 'Rinoitwa Rondedzero'.
Chii chinonzi ficha faira uye ine zvarinazvo
Feature mafaera ari mameseji mafaera ane .chiitiko kuwedzera, uko kunogona kuvhurwa nechero zvinyorwa zvemavara pamwe nekuverengeka nechero BDD-inoziva chishandiso, seCucumber, JBehave kana Behat.
Feature mafaera anofanirwa kutanga nemamiriro ezvinhu echinhu (chinova ndiyo nyaya yacho), ichiteverwa nechero chiitiko chimwe mune inotevera fomati.
Feature: Mamwe mavara akapfava asi anotsanangura izvo zvinodiwa
Kuti uone yakatumidzwa kukosha bhizinesi
Seye yakajeka system mutambi
Ndiri kuda kuwana mhedzisiro inobatsira inoenderera mberi nechinangwa
Mamiriro: Mamwe mamiriro ebhizimusi anogona kutsanangurwa
Kupiwa zvimwe zvirevo
Uye zvimwe zvirevo
Kana chimwe chiitiko nemutambi
Uye chimwe chiito
Uyezve chimwe chiito
Ipapo mimwe miedzo inoedzwa inozadzikiswa
Uye chimwe chinhu chatinogona kutarisa chinoitikawo
Zviitiko mumafaira emafaira zvinofanirwa kutarisa pane 'chii' pane kuti 'sei'. Zviitiko zvinofanirwa kunge zvakapfupika uye kusvika padanho, kuitira kuti muverengi akurumidze kubata chinangwa chemuedzo asina kuverenga matanho mazhinji asina basa.
Nei tichifanira kunyora maficha maficha
Sezvambotaurwa, chinangwa chekutanga cheBDD nzira ndeyekukurudzira kutaurirana pakati peboka rinoburitsa. Chinangwa chemafaira emafaira ndechekunyora zviitiko zvakataurwa kuburikidza kuitira kupa chiratidzo chehuwandu hwebasa rakabatanidzwa mukuendesa chimiro. Iwo maficha emaficha zvakare ari madhiraivha eiyo otomatiki bvunzo. Feature mafaera anoshandawo sedudziro yekuitwa (DoD), zvichireva kuti kana zvese zviitiko zvaitwa uye zvayedzwa zvinobudirira, tinogona kumaka nyaya seyakapera.
Ndiani anofanirwa kunyora maficha maficha
Izvo hazvina basa chaizvo kuti ndiani anonyora / kunyora mafaira maficha, inogona kuve chero nhengo yeboka rekutumira, zvisinei, zvirimo (zviitiko) zvinokurukurwa nevatatu veDev-QA-BA ndizvo zvakakosha chikamu mafaira. Kuwana kunzwisiswa kwakajairika kunzwisiswa kwechinhu ndicho chinhu chakakosha.
Mafaira anofanira kunyorwa riini
Feature mafaira anofanirwa kunyorwa panguva yezvikamu zvekushambadzira nyaya panotsanangurwa ruzivo rweyese nyaya. Feature mafaera ane zviitiko zvinofanirwa kunyorwa kusati kwatanga kuvandudza kuitira kuti vanogadzira pamwe neQA vanzwisise zvakajeka chinangwa chenyaya. Panofanirwa kuve nekunzwisisana kwenyaya yacho. Zviitiko zvinoshanda sezvinodiwa mukusimudzira.
Iko kunofanirwa kuisa mafaera kuchichengetwa
Panofanirwa kuve nechero sosi yechokwadi inoshanda zvese seyakatsanangurwa uye kuomesa kuuraya, nekudaro kunofanirwa kuchengetwa kumwe kunhu kwese nhengo yechikwata ichiwana nyore.
Tataura izvozvo, nekuti iwo mafaera emaficha ndiwo madhiraivha eiyo otomatiki bvunzo, ivo vanofanirwa kuchengetwa mune sosi yekudzora sisitimu (GitHub) kuitira kuti chero zvigadziriso zvemafaira epamhepo zvionekwe pakarepo kumayedzo.
Kune vasiri-technical nhengo vasina ruzivo neGit, tinogona kugara tichiita yakaoma-kumhanya yeiyo mafaera maficha ayo anozobva aburitsa rondedzero yezvese zviripo zviitiko pasina kunyatso kushandisa iwo maficha maficha.
Tinofanira kunyora sei mafaira emafaira
Iko kune kazhinji nzira mbiri dzekunyora maficha maficha - Imperative uye Declarative
Kutevedzera chimiro chekunyora ficha refaira, chiito chakanyanya, chine zvakadzama zvemazinga uye ruzivo rwakawandisa.
Pros: munhu achiverenga iyo ficha faira anogona kutevera nhanho-nhanho
Cons: Nekuda kwehuwandu hwakawanda, muverengi anogona kurasikirwa nepfungwa yenyaya uye bvunzo. Iyo ficha faira inova yakakura kwazvo, inonetsa kuitisa uye inogona kutadza nekuda kweUSI inogadziridzwa.
Kuzivisa chimiro chekunyora chinhu chefaira chakapfupika uye chakanangana, chine chete chakakodzera ruzivo nezvenyaya yacho.
Pros: Iyo yekuzivisa nzira inoverengwa zvakanyanya sezvo iine mashoma matanho muchiitiko. Muverengi anogona kunzwisisa zviri nyore chiyero chemuedzo uye nekukurumidza kuona kana paine zvinhu zvakakosha zvisipo.
mota 360 mutambo kupfeka 2.0
Samsung galaxy s7 kumucheto kureba
mitambo yakavhurika yepasirese ios
Makadhi akanakisa e Micro SD e Samsung Galaxy, LG, Motorola, uye Xperia mafoni (2021)
Metro neT-Mobile inotangisa madema eChishanu madhiri: emahara AirPods, kudzikisira pasamsung, LG nhare
OpenSignal: Verizon vs AT&T vs T-Mobile vs Sprint LTE kumhanya uye kuvimbika Q4 mushumo wabuda
Java ArrayList Maitiro Ane Mienzaniso
PSA: Unoda chinhu chidiki asi chakakosha kuti uwane T-Mobile & apos; s yakamira 5G network
Apple iPad Pro (2021) vs iPad Pro (2020): ongorora
Akanakisa kickstand makesi eSamsung Galaxy Note 8
Samsung Gear VR Innovator Edition yeGalaxy S6 uye S6 kumucheto ikozvino yave kuwanikwa ne $ 199.99